दर खुवाउन जुटाइएको रकम कोरोना कहरका कारण विद्यालयलाई सहयोग | Butwal Dainik
दर खुवाउन जुटाइएको रकम कोरोना कहरका कारण विद्यालयलाई सहयोग
बागलुङ, भदौ १३ । गलकोट समाज जापान, क्षेत्रीय समिति नागोयाले गलकोट नगरपालिका–७ मल्म स्थित सिरबारे प्राथमिक विद्यालयलाई रु. ५० हजार आर्थिक सहयोग गरेको छ । अक्षयकोषका रुपमा रहने गरी आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको समितिका अध्यक्ष रामु थापा काजीले बताउनुभयो ।
समितिका पदाधिकारी, सदस्य र शुभेच्छुकबाट उक्त रकम जुटाइएको थियो । समितिको बैठकले कोरोनाका कारण तीज पर्वमा दर खुवाउने लगायतका औपचारिक कार्यक्रम गर्न नसकिएपनि महिला/बालबालिकाका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । “शैक्षिक विकासमा सानो भएपनि सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले आफ्नै गाउँको विद्यालयलाई रोज्यौँ”, अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो । सो विद्यालयमा दलित समुदायका बालबालिका मात्र अध्ययनरत छन् ।
वि.सं. २०५३ सालमा स्थापना भएको विद्यालय नजिक दलित समुदायको बाहुल्य बस्ती छ । विद्यालयको आर्थिक स्थिति पनि कमजोर छ । विद्यालयलाई पहिलोपटक अक्षयकोषका रुपमा सहयोग आएको प्रधानाध्यापक कल्पना गौतमले बताउनुभयो । “विद्यालयमा अहिलेसम्म कुनै कोष थिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “समस्यामा परेको विद्यालयलाई सहयोग गर्ने उहाँहरु धन्य हुनुहुन्छ ।”
अक्षयकोषको ब्याजबाट वर्षेनी उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई पुरस्कृत÷सम्मान गर्ने योजना तय गरिएको सिरबारे प्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष छविलाल दर्जीले बताउनु भयो । कक्षा ३ सम्म पढाइ हुने उक्त विद्यालयमा अहिले १८ छात्रा र १३ जना छात्र छन् । विद्यालयमा स्थायी र राहत गरी दुई शिक्षकको दरबन्दी रहेको अध्यक्ष दर्जीले जानकारी दिनुभयो । अन्य शिक्षक/कर्मचारीको खर्च स्थानीय स्रोतबाट धानिएको गलकोट नगरपालिका वडा नं ७ का वडा अध्यक्ष सुवेदार टिका बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारको सहयोगमा गत वर्ष दुई र यो वर्ष पनि दुई कोठे भवन बनेको वडा अध्यक्ष थापाले बताउनु भयो ।
विद्यालयमा अहिले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन हुँदै आएको छ । कम्प्युटर लगायत प्रविधियुक्त सिकाइका लागि भने विद्यालयमा स्रोत, साधनको कमी रहेको वडा सदस्य पदमा नेपालीले बताउनु भयो । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि अन्य क्षेत्रबाट पनि सहयोग जुटाउन समन्वय भइरहेको महिला जागरण केन्द्र मल्मका अध्यक्ष ललिता थापाले बताउनुभयो । थापाले गलकोट समाज जापान क्षेत्रिय समिति नागोया सँग समन्वय गरी उक्त रकम विद्यालयमा अक्षयकोषको रूपमा स्थापना गर्नको निमित्त भुमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।